Mayelana NATHI - Anhui Lihua Wood Composite Co., Ltd.
Anhui Lihua Izinkuni Composite Co., Ltd. yi-High and New Tech. Ibhizinisi, elimboza isitshalo samamitha ayi-15,000 sq, esiseLangxi park park, lapho kuhlangana khona isifundazwe i-Anhui, iZhejiang nesifundazwe iJiangsu, sijabulela ukufinyelela okulula kwinethiwekhi enkulu yezokuthutha. Ifektri yethu ihlanganisa ukuklama, ukucwaninga, ukumaketha kanye nokusetshenziswa kwento eyakhiwe ngokhuni epulasitiki ekhiqizwa
Sinezintambo zokukhiqiza ezingama-24 ezikhiqizwa minyaka yonke ngamathani ayi-20 000, aqinisekisa imikhiqizo ezinzile futhi efike ngesikhathi ehlinzeka ngemikhiqizo yethu eyinhloko ifaka: i-WPC decking, i-WPC wall cladding, ucingo lwe-WPC, i-WPC handrail, i-WPC pergola, i-WPC flower pot kanye ne-WPC ebhentshini netende. Zonke izinhlobo zezinto zenziwa ngezinqubo eziqinile ze-QC.
Sineqembu le-QC elinokuhlangenwe nakho okungaphezu kweminyaka engu-3 emkhakheni. Imikhiqizo ihlolwe kwinqubo ngayinye. Ezinye zazo zivivinywa umuntu wesithathu. Futhi sethula uhlelo lokulawulwa kwekhwalithi oluhlakaniphile lwe-ERP kanye nohlelo lokukhiqiza. Konke kusobala futhi kulawulwa kusuka kwesinye isinyathelo kuye kwesinye. Kakhulu singabasebenzi bendawo, basebenze lapha iminyaka eminingana benolwazi olungcono lokukhiqiza. Onjiniyela abakhulu basebenze ngokwakhiwa okungaphezulu kweminyaka eyishumi.
Sine yokuthengisa iqembu kokubili ekhaya nakwamanye amazwe izimakethe. Sigxila ekumaketheni, emikhiqizweni emisha nakubuchwepheshe, sigcina sishintsha futhi sihlola ubuchwepheshe obusha nemikhiqizo emisha.Sinethimba lensizakalo elincane nelinamandla elinokuphendula okusheshayo nekhono elihle lokuxhumana
Amakhasimende ethu avela eYurophu, eNyakatho Melika, eNingizimu Melika, e-Afrika, eMpumalanga Ephakathi nase-Asia. Imikhiqizo yeLihua ihlolwe yi-SGS nge-EU WPC yokulawula ikhwalithi ejwayelekile ye-EN15534-2004, i-EU fire rating Standard neB grade yokulinganisa umlilo kanye ne-American WPC ejwayelekile ye-ASTM. Futhi siqinisekiswe nge-IS09001-2008 Quality Management System, i-ISO14001: 2004 Uhlelo Lokulawulwa Kwemvelo, i-FSC ne-PEFC. Siyakwamukela ukuvakashela imboni yethu.
Izinzuzo:Imikhiqizo yethu inekhwalithi enhle nesikweletu ukusivumela ukuthi sikwazi ukusetha amahhovisi egatsha nabasabalalisi ezweni lethu.
Ubuchwepheshe:Siphikelela ezimfanelweni zemikhiqizo futhi silawula ngokuqinile izinqubo ezikhiqizayo, ezibophezele ekwenziweni kwazo zonke izinhlobo.
Isevisi:Noma ngabe kuthengiswa ngaphambili noma ngemuva kokuthengisa, sizokunikeza insizakalo enhle ukukwazisa futhi usebenzise imikhiqizo yethu ngokushesha okukhulu.
Ukudalwa kwenhloso:Le nkampani isebenzisa amasistimu wokuklama athuthukile kanye nokusetshenziswa kokuphathwa kohlelo lwe-ISO9001 2000 lomhlaba jikelele oluthuthukile.
Ikhwalithi enhle kakhulu:Le nkampani igxile ekukhiqizeni imishini yokusebenza ephezulu, amandla aqinile wezobuchwepheshe, amakhono okuthuthuka aqinile, izinsizakalo ezinhle zobuchwepheshe.
Namandla ithimba lobuchwepheshe:Sineqembu eliqinile lobuchwepheshe embonini, amashumi eminyaka wesipiliyoni sobungcweti, izinga elihle lokuklama, okwenza ikhwalithi ephezulu yokusebenza kahle kwemishini ehlakaniphile.
Ukuhlobisa i-WPC yangaphandle, WPC decking esiyinhlanganisela, WPC decking ongaphandle, WPC phansi, WPC decking phansi, ngokhuni plastic decking esiyinhlanganisela,